အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေးကမ်းခြင်း - Google Pixel2နှင့် Pixel Buds များကိုအခမဲ့ရယူပါ Androidsis
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေးကမ်းခြင်း - အခမဲ့ Google Pixel2နှင့် Pixel Buds များကိုရယူပါ
ဟိုဆေး Alfocea | | ပြိုင်ပွဲ
Androidsis တွင် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအားသူတို့၏နေထိုင်ရာနိုင်ငံမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၎င်းတို့ပါ ၀ င်နိုင်သောဂူဂဲလ်ထုတ်ကုန်များအခမဲ့ ၀ ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ raffle အသစ်တစ်ခုတည်ရှိမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားကျေနပ်စွာအသိပေးသည်။ Google Pixel2စမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Pixel Buds နားကြပ်အသစ်များ.
ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါ ၀ င်ပြီးအနိုင်ရရှိသူရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်တဲ့လက်တဆုပ်စာအနည်းငယ်ကိုရရှိနိုင်တယ်။ သင်မည်သို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိရှိရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်လိုအပ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဂူးဂဲလ် Pixel2XL ကိုကစားခဲ့သည့်အကြိမ်အပြီးတွင်သူ၏တစ် ဦး တည်းသောညီလေးဖြစ်သောအလှည့် Google က Pixel 2၎င်းသည်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်သော်လည်းဂူးဂဲလ်၏ယခုနှစ်ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်အတွက်ခိုင်မာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည် pixel ဘူးသီး.
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Google ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်များကိုနောက်ဆုံးတွင်တင်ပြပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင် Google Pixel သည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသို့မသွားနိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောများအတွက် IP2017 လက်မှတ်အဖြစ် high-end သတ်မှတ်ချက်များ ဖုန်မှုန့်နှင့်ရေခုခံစျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းကင်မရာဖြစ်နိုင်သည့် Google Lens ၆၅ လက်မ OLED မျက်နှာပြင်တစ်ဦး 2.700 mAh ဘက်ထရီ ၎င်းတွင်သုံးနှစ်ပြည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်မွမ်းမံမှုများလည်းပါဝင်သည်။
ဒီအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အထုပ်ကို Google Pixel2နဲ့ Pixel Buds တို့ဖြင့်ရရှိရန်သင်လုပ်ရမှာအားလုံး အဆိုပါ giveaway က်ဘ်ဆိုက်သွားရောက်ကြည့်ရှု Android Authority တွင်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သတိရပါ သင်လုပ်လေလေ၊ များများရှယ်လေလေ၊ ထို့ကြောင့်, သငျသညျဆုရှင်သို့မဟုတ်ဆုရှင်ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုမိုရန် ဒါကြောင့်ကံကောင်းပါစေ !!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ပြိုင်ပွဲ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပေးကမ်းခြင်း - အခမဲ့ Google Pixel2နှင့် Pixel Buds များကိုရယူပါ
ဆာဂျီယို ဦး နှောက် ဟုသူကပြောသည်
ပါဝင်: sergio crespo
Sergio Brains ကိုပြန်ပြောပါ
Rocco Shades အရိပ် ဟုသူကပြောသည်
Rocco Shades Shades သို့ပြန်သွားပါ
Franky Javier Otaku ဟုသူကပြောသည်
Franky Javier Otaku အားပြန်ပြောပါ
Android Authority နှင့် DE Android Authority တွင်ဆွဲပါ။ Androidsis သည်တစ်ယောက်ယောက်ကိုသင့်အားလာလည်ရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်သောစာမျက်နှာများကိုရည်ညွှန်းရန်ရည်စူးပြီးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ။
Miriam အလက်ဇန္ဒြာ ဟုသူကပြောသည်
Miriam Alexandra အားပြန်ကြားပါ
Oppo F5 သည် Samsung နှင့် iPhone ကိုမေ့သွားစေမည့်တရုတ်မိုဘိုင်း